ယောက်ျားက မင်းကို ငြီးငွေ့နေလား | စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 12/11/2021 23:14 | စုံတွဲနှင့်လိင်
ဆက်ဆံရေးများစွာတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် မသေချာမရေရာမှုများကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ မင်းယောက်ျား ပင်ပန်းရင် စုံတွဲတစ်တွဲအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့နှောင်ကြိုး၊ မပေးဝံ့ပေမယ့် ခံစားချက်တွေရှိနေရင် ပိုနာကျင်စရာမရှိပါဘူး။ မေးတဲ့အဆင့်၊ အရာအားလုံး ပြေလည်သွားမှာကို စောင့်ရတာ ပိုကြိုက်တယ်။
စုံတွဲများ၏ အစိတ်အပိုင်းများထဲမှ တစ်ခု၏ စိတ်ဝင်စားမှု ကင်းမဲ့မှုသည် ကြီးစွာသော အရာတစ်ခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ monotony သို့မဟုတ် စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်း။ အဆိုးဆုံးကတော့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ တွယ်တာမှု ကြီးကြီးမားမားကြောင့် ကျိုးပျက်သွားနိုင်လို့ပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် အပြန်အလှန်မဆက်ဆံသောသူတစ်ဦးအတွက် ဒုက္ခရောက်နေချိန်တွင်၊ သူမသည် မိမိကိုယ်ကို ကန့်သတ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ကိုယ်သင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖန်တီးစီမံပါ။. ဒါကြောင့် မင်းကို မချစ်တဲ့သူနဲ့ လမ်းခွဲရမယ်။
1 ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ အချစ်ရေးကို စိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
1.1 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်သွားသည်။
1.2 သူက စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး မင်းရဲ့ပြဿနာတွေကို ဂရုမစိုက်ဘူး။
1.3 မင်းဘာလုပ်​​နေလဲ သူ့ကိုစိတ်​အ​နှောက်​အယှက်​ဖြစ်​​နေတာလား
1.4 သူခံစားရတာကို မရိုးသားဘူး။
1.5 သူမင်းတို့နဲ့ အစီအစဥ်မချတော့ဘူး။
1.6 အပြင်ထွက်ဖို့တွေ့တဲ့အခါ သူပျင်းတယ်။
ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ အချစ်ရေးကို စိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
စကားရည်လုပွဲသည် အဖြစ်မှန် နှစ်မျိုးခွဲနိုင်သည်။ လူနှစ်ယောက်အတူတကွနေထိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း ချိန်းတွေ့သည့်ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားသောအခါတွင် လူနှစ်ဦး၏ဆက်ဆံရေးအမျိုးအစားကို ကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ် ငါတို့တွေ့နိုင်တယ်။ တည်ငြိမ်ပြီး လုံခြုံသောဆက်ဆံရေး နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် တူညီသောအမိုးအောက်တွင် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဆက်ဆံရေး နှစ်မျိုးထဲမှ တစ်ခုခုကို မတွေ့မီတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနိုင်သည်။ အဲဒီလူက သူ့အချစ်ကို မျှဝေရတာ ငြီးငွေ့တယ်။ သင့်ဇနီးမောင်နှံအတွက် ဤကိစ္စတွင်၊ အမျိုးသမီးများသည် ထိုလက္ခဏာများကို သင်သတိပြုမိစေရန် အကြံပြုချက်များစွာဖြင့် ဤစိတ်မဝင်စားမှုကို တန်ဖိုးထားနိုင်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်သွားသည်။
လက်တွေ့အားဖြင့် အဆက်အသွယ်မရှိခြင်း သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သေချာတယ်။ အိပ်ရာထဲမှာ ရင်းနှီးမှုက အဆင့်နိမ့်သွားတယ်။အရည်အသွေးရော အရေအတွက်ရော စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့။ ယခု တွေ့ဆုံမှုများသည် ပို၍ ကြိုကြားကြိုကြားဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အစပိုင်းကဲ့သို့ ပြင်းထန်မှုမရှိတော့ပေ။ သူမသည် သင့်အား လိင်ကိစ္စအတွက်သာ ရှာဖွေခြင်းရှိ၊ မရှိ သင်နှင့် သူမထံ အပ်နှံခဲ့သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ယခု ပို၍ အေးစက်လာပါက သင်သေချာနိုင်ပါသည်။
သူက စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး မင်းရဲ့ပြဿနာတွေကို ဂရုမစိုက်ဘူး။
အခုဆို သူအမြဲတမ်း လုပ်နေကျအတိုင်း အိမ်စာလုပ်ဖို့ မင်းကို အားမကိုးတော့ဘူး။ အကွာအဝေး ပေါ်လာတော့တယ်။ နေ့ဘက်မှာ ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြောပြဖို့ သူ့ပခုံးကိုတောင် မမှီပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေတင်မကဘဲ အမျိုးသမီးက နှစ်သိမ့်မှုရယူပြီး သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ပြဿနာအချို့ကို ပြောပြပါတယ်။ မကြားရပါ။. ယောက်ျားသည် ပို၍ သမာသမတ်ကျပြီး ဆက်ဆံရေးပြဿနာများကို သူမအတွက် အရေးမကြီးတော့သော်လည်း၊
သူတို့ရဲ့စိတ်မဝင်စားတာကို ညွှန်ပြနိုင်တဲ့ နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ သင်ပြောသမျှ ဒါမှမဟုတ် လုပ်သမျှဟာ သူတို့ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အခါပါပဲ။ စကားဝိုင်းတစ်ခု လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲအနည်းငယ်တွင် အဆုံးသတ်ပါ။သဘောထားကွဲလွဲမှုများရှိ၍ အချိန်မရွေး ခိုက်ရန်ဖြစ်တတ်သည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အကြောင်းပြချက်များထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆင်ခြေရှာနေသည်။ သူတို့၏အကွာအဝေးကို အကြောင်းပြရန်။
ဒါက ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုပါ။ ယောက်ျားဖြစ်နိုင်တယ်။ နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ မင်းရဲ့နှစ်သိမ့်မှုကို ရှာဖွေပါ။ သင့်လက်တွဲဖော်ကို မချစ်တော့ပါ။ ရိုးရိုးသားသား ပြောရရင် ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ရေရှည်မှာ စိတ်ဝင်စားမှု ပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတာ ပြသဖို့ဆိုရင် သူတို့က မင်းကို လိမ်လိမ့်မယ်။
မည်သည့်အစီအစဥ်မှ ရှောင်ပြေးပါ။ စုံတွဲအဖြစ် သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး၊ လူတိုင်းနီးပါး လုပ်ဆောင်ရမည်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း သို့မဟုတ် သူ့အတွက် နေရာလိုအပ်ခြင်းစသည့် အကြောင်းပြချက်များ ပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း အဆိုးဆုံးမှာ ပြင်ပမှ တစ်စုံတစ်ရာ အဆိုပြုပြီး ငြင်းဆန်ခြင်း မရှိသည့်အခါတွင် အဆိုးဆုံးမှာ လာပါသည်။ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှု မရှိရင် ဘယ်အချိန်မှာ သတိထားမိနိုင်မလဲ။ သူ့အစီအစဥ်မှာ မင်းကိုမထည့်တော့ဘူး။အမြဲတမ်း လုပ်စရာတွေ ရှိတာ ဒါမှမဟုတ် အရမ်းတင်းကျပ်တဲ့ အချိန်ဇယား ရှိသူ။
မကြာသေးမီက မင်းရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာ သူငြီးငွေ့လာတာကို သတိထားမိတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးပြီ။ သင့်မှာ စကားပြောကောင်းတဲ့ စကားတောင် မရှိပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ် မင်းသူ့ကိုပြောသမျှကိုတောင် ငြီးငွေ့နေပုံရတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ မင်းရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု မရှိလို့လား။ သင်ကလွဲလို့ လူတိုင်းကို သူကြည့်တဲ့အခါ တခြားမိန်းမတွေကိုတောင် ကြည့်တယ်။
လူတစ်​​ယောက်​က မင်းကိုချစ်​​နေချိန်​မှာ သူသာကြည့်​​နေတယ်​ သူ့ရဲ့ အခိုက်အတန့်တွေကို မင်းနဲ့ မျှဝေပါ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူက မင်းကို လွမ်းတယ်၊ မင်းအကြောင်း အများကြီး တွေးနေလို့။ အဲဒီလူဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပုံရိပ်ဖြစ်လာပြီး သင့်အပေါ် သူတို့ရဲ့ တုံ့ပြန်ပုံက ဘယ်လိုမှ မမျှတဘူးဆိုတာကို စတင်သတိထားမိလာတဲ့အခါ၊ ကွဲလွဲမှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိထားရပါမယ်။
အစပြုရန်၊ သင်သည်ထိုသို့ပြုရလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့ ထင်မြင်ချက်မှန်သမျှကို တုံ့ပြန်လိမ့်မယ်၊ ခပ်ခွာခွာနေနေတာကို သတိထားမိပြီး မပြင်ဘူးဆိုရင် သူက မင်းကို ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ သူက ရိုးရိုးသားသားနဲ့ မင်းကို ငြီးငွေ့နေပြီလို့ ပြောရင် ဒီမှာ လုပ်စရာ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအကွာအဝေးကို သင်သတိမထားမိဘဲ အဲဒါကို သတိမထားမိတာမျိုး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အနားယူခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။. ဒီအချိန်မှာ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » စုံတွဲနှင့်လိင် » ယောက်ျားတစ်ယောက်က မင်းကို ငြီးငွေ့နေလားဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။